Khabiirka Cilmi-baarista wuxuu sharraxayaa sida looga saari karo Gaadiidka Gudaha Google Analytics
Dadku waxay raadinayaan inay isticmaalaan Google Analytics oo ka baxsan webka. Google wuxuu bixiyaa adeegga si uu u caawiyo milkiilayaasha boggaga si ay ula socdaan oo ay ula socdaan dhamaan taraafikada booqanaya goobahooda si ay uga horjoogsadaan milkiilayaasha spam gudbinta iyo noocyada kale ee spam. Waa lagama maarmaanka ah in dadku aqoonsadaan in hawlahooda ku yaal goobta ay sidoo kale abuuri karaan gaadiidka ay Google Analytics ka qaadi karto oo ku darayso warbixinnada. Haddii qofku uusan hor istaagin taraafikada gudaha, ma jirto si loo hubiyo in natiijooyinka heleen ay sax yihiin. Xakamaynta taraafikada gudaha macnaheedu waa in mid ka reebaysa booqashadooda goobta, iyo shaqaalaha, iyo sidoo kale qof kasta oo kale oo ka hela goobta goobta ururka.
Habka keliya ee midi u heli doonto natiijooyin sax ah ee taraafikada iyada oo aan la taaban karin waa marka laga reebo taraafikada gudaha ee ka imanaysa taranka falanqaynta - clearomizer ego vapezz. Muhiimada ay leedahay tan ayaa ah in gaadiidka gudaha uusan kaliya ka gudbi doonin warbixinnada taraafigga laakiin heerarka isbeddelka ayaa sidoo kale. Xallinta arrintani waa mid sahlan, dadka isticmaalkuna waxay dooran karaan laba doorasho.
Ryan Johnson, oo ah Maamulaha Sare ee Sare Naqshad , wuxuu eegaa tilmaamaha uu raacayo hab kasta oo la soo jeediyey.
Hababka looga reebayo Gaadiidka Gudaha
# 1 Ma jiraan Google Analytics Browser Add-on
Habka wuxuu u adeegaa mid ka mid ah hababka ugu fudud ee looga hortagi karo gaadiidka gudaha ee ururka. Iyadoo aan jirin faahfaahin dheeraad ah ee Google Analytics, ma jirto hab ay qalabku u socon karaan hawlaha gudaha. Waxay si fiican u shaqeysaa shabakadda Firefox. Haddii mid aan awoodi karin inuu isticmaalo kordhinta, waxaa jira wax bedelaad ah. Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale isticmaali kara Google Analytics-ku-soo-rogistiisa. Waxay u shaqeysaa si la mid ah maadama Google Analytics maadaama ay ka hortagayso dhammaan gaadiidka soo socda ee ka yimaada gaadiidka gudaha. Marka la barbardhigo kan dambe, wuxuu u shaqeeyaa dhowr daalacood. Dareemayaashan waa sida IE, Safari, Google Chrome, Firefox, iyo Opera..Markaad isticmaasho ballaadhintan, had iyo jeer xasuusno qodobbada soo socda:
Kordhinta kaliya waxay la shaqaysaa barta shabakada oo ah in user uu ku rakibo. Dadku waa inayan u qaadin in ay u shaqeyso dhammaan daalacashada kaliya sababtoo ah waxay ku jirtaa mid. Haddii mid ka mid ah isticmaala dijitaaleyaal dhowr ah, hubso inaad ku rakibto iskudubka mid kasta oo ka mid ah daalacayaashan.
Sidoo kale, naqshadaynta kordhinta maaha inay ka hortagto in bogag kale oo ka muuqda warbixinnada taraafikada. Waxay kaliya xaddidaan gelitaanka Google Analytics dhamaanba goobaha gudaha
Haddii qofku rabo in uu Google Analytics galo macluumaadka, ka dibna hakad geli kaliya ku darida
# 2 Samee Google Analytics IP Fiiro
Habka lagu xakameynayo baabuurta gudaha dhexdeeda ayaa aad ugu badan dadka in ay badbaadiyaan sharafta macluumaadka taraafigooda. Waa sababta Google ay u taageereyso filtarrada ipv4 iyo ipv6. By blocking cinwaanka IP ah, ka dibna waxaa suurtogal ah in la xakameeyo dhammaan taraafikada ka imanaya cinwaanka IP gaar ah. Waa kuwan sida loo tagayo:
Haddii uu rabo inuu ogaado cinwaanka IP, waa inay soo booqdaan bogga CYIP. Koobi ama qoro cinwaanka IP
Inuu furo Google Analytics iyo madaxa doorashada.
Kadibna, Dooro Filters hoosta qaybta xisaabta.
Dooro shaandheer dheeraad ah, oo sifudhiga cusub u dhiib magaca.
Nooca filtooma waa in horey loo soo saari
Dooro inaad ka saartid menuka soo muuqda oo geli cinwaanka IP-ga ee aadan doonaynin diiwaanada taraafikada.
Kuwani waxay raacaan taraafikada hal cinwaan gaar ah. Haddii mid ka mid ah uu doonayo inuu ka saaro cinwaanada IP-ga, raac nidaamka isku midka ah ee kor ku xusan. Si kastaba ha ahaatee:
Xulo caadada nooca filter
Waxaa jira shaandho filter ah oo lagu buuxiyo xulashada ka-reebista oo dooro cinwaanka IP-ga.
Habka sifududeynta waa in lagu daro ereyga kaas oo la mid ah dhammaan cinwaanka IP-kan oo raba inuu ka baxo